Dị ikpeazụ nke Plex Cloud na-abịa, iji mụta ọdịnaya site na Dropbox na nyiwe ndị ọzọ | Esi m mac
La plex ngwa, bụ ọrụ magburu onwe ya ruo ọtụtụ afọ iji depụta vidiyo ma ọ bụ faịlụ ọdịyo gị ma kpọọ ha na kọmpụta ọ bụla ebe ị nwere ohere ịntanetị na ngwa Plex arụnyere. Anyị anaghị ekwu maka Mac, ị nwekwara ike ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị gị ma ọ bụ vidiyo na iOS, Apple TV ma ọ bụ TV dị egwu.
La Plex igwe ojii, bụ ọrụ agbakwunyere bara uru nke enyere ndị ọrụ ụfọdụ ọdịda ikpeazụ. N'ime oge a, ndị mmepe emeela ka ihe niile dị na ngwa ahụ doo anya, iji malite ya taa.
Ọ bụ njem dị ịtụnanya n'ime ọnwa ole na ole gara aga, ya na igwe ojii ahụ na-arụ ọrụ gafee kọntinent anọ iji rụchaa maka mbupụta anyị n'ihu ọha. Plex Cloud bụ ụzọ kachasị mfe iji bido ihe nkesa Plex gị na sekọnd, ma nye nzaghachi anyị ahụla (yana ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na-arịọ isonyere mmemme beta anyị), anyị nwere obi ụtọ ịkpọsa na ndị ọrụ niile si Pass Plex nwere ike ịkwalite ọrụ a dị egwu.
Tonweta Plex igwe ojii chọrọ ka edebanye aha na ya Plex Pass, nke bụ ọrụ Plex's adịchaghị. Nnukwu ihe ọhụụ bụ nnabata nke sava ndị dị na mpụga na ọbá akwụkwọ vidiyo anyị ma ọ bụ ụlọ ịgba egwu abalị. Nke ahụ bụ, ruo ugbu a anyị nwere Mac nke jere ozi dị ka ihe nkesa, mana enwere ike ịnweta ọdịnaya ejiri na Dropbox, Google Drive ma ọ bụ OneDrive. Ọchịchọ anyị ga-enwe ike ịnweta ọdịnaya ejiri na iCloud mbanye, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ Apple na-ahọrọ ọrụ igwe ojii nke Apple, ọ bụ n'ihi nchikota ya na ụdị ntanetị yana nnweta site na ya gaa na peeji nke, Ọnụ Ọgụgụ na Ihe Isi Okwu.
Anyị nwere ike ịdenye aha na Plex Pass site na € 4.99 / ọnwa ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ, denye aha kwa afọ ma ọ bụ maka ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Dị ikpeazụ nke Plex Cloud bịara, iji kpọọ ọdịnaya site na Dropbox na nyiwe ndị ọzọ
Echere m na ọ ga-enwe uru ya dị ka ịghara itinye ego na nas ma ọ bụrụ na ọ mebie gị, ị gaghị edozi ya, mana ọ nwekwara ọghọm nke ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa belụsọ na ị gafere ndụ gị ma chefuo, ị chọkwara nchekwa igwe ojii nke ọtụtụ TB na-akwụ kwa afọ, m ikpe m na-enweghị a plex ngafe, naanị plex na a nas na 4Tb expandable ka 8, ya mere na oké ulo oru mbo nke ego na nas m echefu banyere ngafe na ohere na m na-ekiri usoro ahụ pụọ n'ụlọ, Ọ bụ ezie na m na-ahụ ya na ntanetị, echere m na ọ ga-ahapụ gị ka ị budata ya iji hụ ya pụọ ​​n'ụlọ ma ghara megabytes, ọ dị ka ihe nzuzu n'ihi na m tinyere ya na ekwentị ma ọ na-arụ ọrụ otu, na nkenke okwu nke uto na ihe ịchọrọ imefu, m ka na-eche ebe ị ga-etinye ego na ya bụ ezigbo data data mkpanaka site na 8 GB gaa n'ihu.